बेपत्ता नागरिकहरूका आफन्तको प्रश्न–‘हाम्रा आफन्त कहाँ छन् ?’ – इन्सेक
बेपत्ता नागरिकहरूका आफन्तको प्रश्न–‘हाम्रा आफन्त कहाँ छन् ?’
काठमाडौँ ०७६ भदौ १४ गते
सभाहलमा भेला भएका सबै मानिसहरूको एउटै प्रश्न थियो–‘सरकार हाम्रा आफन्त कहाँ छन् ?’ देशका विभिन्न ठाउँहरूबाट भेला भएका उनीहरूको पीडा र व्यथा पनि समान रहेको बताएका छन् ।
उनीहरूले आफन्तको खोजी गर्न थालेको वर्षौँ बितिसक्यो तर अझै पनि जबाफ पाएका छैनन् ।
मार्टीन चौतारीको सभाहलमा उपस्थित थिइन् गोरखाको हर्मी गाउँपालिका–८ की युवती ममता शर्मा । ममताका बुवा राजेन्द्रप्रसाद ढकाललाई २१ वर्षअघि राज्य पक्षले ०५५ साल पुस २४ गते तनहुँको बेलबारीबाट बेपत्ता पारेको हो ।
तत्कालिन शाही नेपाली सेनाद्वारा गिरफ्तार गरिएका ढकालको अवस्था सार्वजनिक नहुँदा परिवारलाई झनै पीडित बनाएको छ ।
ममता भन्छिन्–‘म चार वर्षको हुँदा बुबालाई बेपत्ता बनाए । आज २५ वर्षकी भएँ । बुबाकै खोजीमा भौतारिइरहेकी छु । हाम्रो पीडा कसैले पनि बुझेनन् । अब त न्याय मरिसक्यो की जस्तो लाग्छ ।’
बुबाको अवस्थाका बारेमा राष्ट्रियदेखि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म छानविनको लागि आग्रह गरेपनि त्यसको सुनुवाइ नहुँदा निकै दुःख लागेको उनको भनाई छ ।
बलपूर्वक बेपत्ता पारिएकाहरूको अन्तरािष्ट्रय दिवसको अवसरमा आफन्तको सम्झनामा काठमाडौँको माइतिघर मण्डलामा आयोजित दीप प्रज्वलन कार्यक्रममा पनि उनी सहभागी थिइन् ।
२०६० भदौ ४ गते काठमाडौँबाटै चेतनाथ ढुङ्गानालाई पनि राज्य पक्षले बेपत्ता पा¥यो । चेतनाथका दाजु नवराज ढुङ्गानाले के कारण र कुन अभियोगमा गिरफ्तार गरी बेपत्ता बनाइयो भन्ने प्रश्नको उत्तर अहिलेसम्म नपाएको बताए ।
‘आफन्तको अवस्था थाहा पाउनु हाम्रो अधिकार हो । किन बेपत्ता बनाइयो ? त्यसमा संलग्न अपराधिहरू खुलेआम हिँडिरहेका छन् । तर, पीडित भने दिनरात रुँदै बाँच्नुपरिरहेका छ ।’–उनी प्रश्न गर्छन्–‘कानुनी राज्य भनेको यही हो ? अब हामी न्याय माग्न कहाँ जाने ?’
ममता र नवराज त द्वन्द्वकालिन घटनामा पीडित भएकाहरूका प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । सामान्य अवस्थामा ६० वर्षको उमेरमा सन्तानको भविष्य हेर्दै रमाउनु पर्नेमा अभिभावकहरू सन्तानको अवस्थाका बारेमा रुमलिइरहेका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका सल्यानका एकराज भण्डारी पनि पीडित मध्येका एक हुन् । उनका छोरा विपिनलाई बेपत्ता पारिएको पनि लामो समय बितसक्यो । उनी भन्छन्–‘अब हामी न्यायका लागि पर्खन सक्ने अवस्थामा छैनौँ । सरकारले यसलाई गम्भीरतापुर्वक लिनुपर्‍यो ।’
भण्डारीले १ हजार ३ सय ५० भन्दा बढी बेपत्ता पारिएका नागरिकहरूले परिवर्तनका लागि दिएको योगदानलाई नेतृत्वले बिर्सिएको गुनासोसमेत गरे ।
उनले आफ्ना सन्तानका पनि सन्तानले आफ्नो बाबुको पहिचान खोज्दै गर्दाको पीडा सम्पुर्ण बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारका आखाँमा देख्न सकिने बताए ।
बेपत्ता पारिएकाहरूको सम्झनामा काठमाडौँको माइतीघरमा दिप प्रज्वलनपछि आयोजित कोणसभामा अधिकारकर्मी चरण प्रसाईले वर्तमान सरकार पनि पीडितहरूलाई ढाँट्ने कार्यमा तल्लिन रहेको आरोप लगाए ।